Beentii Nabad & Nolol oo banaanka timid | KEYDMEDIA ONLINE
Beentii Nabad & Nolol oo banaanka timid
In mudo ah Kooxda Nabad & Nolol ayaa sumcad dil ku sameynaysa madaxdii hore ee dalka, gaar ahaan Xasan Sheekh, Sheekh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kooxda NABAD IYO NOLOL oo Farmaajo uu madaxda u yahay ayaa afartii sano ee lasoo dhaafay dagaal siyaasadeed iyo sumcad dil ku haysay Madaxdii hore ee dalka, iyadoo adeegsanaya taageeriyaashooda baraha bulshadda CBB.
Waxay hub ahaan u adeegsatay NABAD IYO NOLOL Is-afgaradkii 2009 dhexmaray Soomaaliya iyo Kenya, kaasoo uu saxiixay CC Warsame oo xiligaas ahaa Wasiirka qorsheynta dowladii Sheekh Sheekh uu hogaaminayay.
N&N si ay u gaaraan ajandahooda siyaasadeed waxay dhaqaalo badan ku bixiyaan dacaayadaha baraha bulshadda ay shacabka ku marin habaabinayeen in badda la gatay, oo Kenya u saxiixeen Sheekh Shariif iyo CC Warsame.
Mid kamid ah qareenada difaacaya Soomaaliya ayaa si cad u sheegay in hadaanay aheyn heshiiska is-afgaradka ee labada wadan ay saxiixeen 2009 uusan heshiis noqon karin, maadaama uu ahaa ujeedka in la wada-hadlo, islamarkaana aan jirin caddeymo Kenya haysato inay badda leedahay.
Tani waxay si cad u muujineysaa in is-afgaradku uu ahaa mid aan sharci ku fadhin, oo labada dhinacna midna waajib ku ahayn inuu fuliyo, ama maxkamad geysto, waayo heshiis qoran oo saxiixan Kenya kama haysato Soomaaliya.
"Sanado badan, Nabad & Nolol waxay kuwa kasoo horjeeda sida CC Warsame iyo Madaxweynihii hore Sheekh Shariif ay ku eedeynaysay inay "Badda ka iibiyeen" Kenya, iyadoo soo qaadatay Is-afgaardkii ay la galeen Kenya," ayuu yiri Rashiid Cabdi oo ah falanqeeye Geeska Afrika.
Dhageysiga Maxkamadda ICJ oo qeybtii labaad shalay dhacay ma aysan kasoo muuqan wax caddeyn ah oo Kenya la timid inay leedahay badda, maadaama aysan jirin Koox sharci-yaqaanno ah oo ku matelaya Dacwadda oo Soomaaliya soo gudbisay 2014.